Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 24)
Nooca cusub ee Tasker oo leh liis wanaagsan oo warar ah, hagaajin iyo isbeddello ah
Nooca cusub ee Tasker wuxuu siiyaa tayo dheeri ah codsi heer sare ah si otomaatig ah howlaha Android
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Kaamirada Filimaanta Maanta
Kaamerada Foorida waa codsi Android ah, astaamaheeda awgood, u qalma in lagu daro buugga codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android.
Xeedho adeegsanaya nanotechnology si uu ugu buuxiyo batteriga daqiiqad gudaheed? StoreDot ayaa leh jawaabta
StoreDot waa shirkad adeegsata nanotechnology si ay ugu soo rogto batteriga casriga ah wax ka yar hal daqiiqo.
Samsung waxay ku soo bandhigeysaa Galaxy Ace Style shaashaddiisu tahay 4-inch, 1.2 GHz chip iyo Android KitKat
Smartphone shaashaddiisu tahay 4-inji, 1.2 GHz chip iyo KitKat oo loogu talagalay Samsung Galaxy Ace Style.
Cusboonaysi WhatsApp hal sano oo dheeri ah bilaash
Casharka xiga waxaan ku barayaa xeelad sharci ah inaad WhatsApp ugu cusboonaysiiso bilaash hal sano oo dheeri ah.
Sida loo rogo Android-kaaga Apple iPhone
Halkan waxaan kaaga tagayaa sida loogu rogo Android-kaaga Apple iPhone-ka iyo in geedi socodka ka dib uu sii wado inuu noqdo mid waxtar leh oo shaqeynaya illaa iyo hadda
Twitter Wuxuu Heshaa Shaashadda Qufulka Daboolka, Appka Qufulka Shaashadda Casriga ah
Twitter wuxuu helaa Cover Lock Screen, codsiga shaashadda qufulka moodada ah ee qayb ka noqon doona kooxda horumarinta shabakadda bulshada.
Xarunta Xakamaynta iOS7 oo bilaash loogu heli karo Android
Xarunta Xakamaynta ee iOS7 waxay si fiican ugu dayataa muuqaalka cusub ee ku daraya nidaamka hawlgalka Apple ee wax kasta oo 4.0 ama ka sareeya ah
Nooca cusub ee VLC oo leh taageero buuxda oo loogu talagalay Android 4.4 KitKat
Noocaan cusub ee VLC, taageerada buuxda ee KitKat-ka Android iyo hagaajinta xasilloonida dalabka ayaa ugu dambeyn la bixiyaa.
3 codsi oo lagu maareeyo Android kombiyuutarkaaga
Barnaamijyada hagaajinaya isku xirnaanta aaladaha ayaa tarmaya, kiiskan waxaan ku soo bandhigeynaa 3 codsi oo lagu maareeyo Android kombiyuutarka.
Ma rabtaa inaad lacag ka qaadatid isticmaalka internetka? Gatwin for Android hadda waxaa laga soo dejisan karaa Dukaanka Play
Gatwin for Android waa codsi noo oggolaanaya inaan xakameyno koontadayada 'Gatwin'. Haddii aad rabto inaad lacag ka bixiso isticmaalka internetka, sii wad akhriska
Halkan waxaan toos kaaga tegayaa apk-ka kamarad Nexus 5 oo leh sawirka Photosphere oo ansax u ah wixii Android 4.2 ama ka sareeya ah.
Sida looga fogaado xiriirada nuqul ee ku saabsan Android
Waxaan kusii wadnaa qaybteena Casharrada ee loogu talagalay dadka cusub ee kujira Androidsis maantana waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida looga fogaado xiriirada nuqulada ah ee Android.
FireChat ee loogu talagalay Android waxay keentaa farriin deg deg ah iyada oo aan loo baahnayn xiriir internet ah
FireChat ee loogu talagalay Android waa soo jeedin aad u xiiso badan oo loo diro farriimaha saaxiibbada dhow iyada oo aan loo baahnayn xiriir internet ama signaal shabakadeed
Qeyb cusub oo loogu magac daray "Dadka" Dukaanka Play-ka si loo arko waxyaabaha ay isticmaalayaasha kale isticmaalaan
Qaybta cusub ee "Dadka" ee ku taal Play Store waxay muujineysaa qiimeynta iyo +1 dadka aad la xiriirto si loo helo waxyaabo cusub.
Sida loo rogo Android-keena Xiaomi
Maanta waxaan ku tusayaa kaliya hal guji oo aan u baahnayn xidid ama wax la mid ah Sida loo rogo Android-keena Xiaomi.
Qalabka CCleaner ee xoogga leh ee loogu talagalay Android hadda waa la heli karaa
CCleaner ee loogu talagalay Android ayaa ugu dambeyntii nagu dhex jira, inkasta oo ay tahay inaad ka qayb gasho barnaamijka beta si aad u soo dejiso oo aad u rakibto
Sony ayaa sii deyn doonta cusbooneysiin si loogu xalliyo cilladda maqalka ee taleefannada Xperia oo leh KitKat
Sony ayaa sii deyn doonta cusbooneysi cusub usbuuca soo socda kaas oo hagaajin doona cilladda maqalka ee taleefannada Xperia oo wata KitKat
Sida looga soo degsado barnaamijyada Google Play adigoon lahayn akoon Google ah
Haddii sabab kasta ha noqotee aadan u rabin akoon Google ah, laakiin aad rabto inaad ku haysato barnaamijyada Google Play ee ku jira Android-kaaga, waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo APK Downloader.
Sida loo xakameeyo isticmaalka xogta ku jirta taleefankaaga casriga ah ee loo yaqaan 'Android Kit Kat'
Casharradan soo socda waxaan ku tusi doonaa sida aan uga helno Android Kit Kat si loo xakameeyo isticmaalka macluumaadka moobilka.
"Hawladayda Ciyaarteyda" waa muuqaal ku cusub Google Play si loo muujiyo +1 iyo qiimeyntaada
Qayb cusub oo lagu daray Google Play oo la yiraahdo "Waxqabadkeyga Ciyaarta" si loo ogaado +1 iyo qiimeynta la siiyay
Universal TV Remote: waa tusaale xayeysiis duulaan ku ah barnaamijyada Android
Universal TV Remote waa tusaale xayeysiis duulaan ku ah barnaamijyada Android iyo waxa Google isku dayayo inuu ku joojiyo si kasta.
Ku daa fiidiyowyo daaqad sabayn leh macmiilkan YouTube ee loo yaqaan SuperTube
SuperTube waa mid ka mid ah barnaamijyada xilligan aad isticmaasho markii ugu horreysay, waxaad ogaatay in barnaamijka rasmiga ah ee YouTube ay ka maqan yihiin waxyaabo badan.
Cusbooneysiin cusub oo BBM ah oo loogu talagalay Android oo hadda lagu heli karo istiikarka BBM iyo in ka badan
Cusbooneysiinta cusub ee BBM ee loogu talagalay Android waxay bixisaa awood u leh inay wadaagaan sawirrada illaa 16MB oo ay u diraan istiraatiijiyada BBM
97% khayaanada waxay doorbidaan Android, waayo?
In kasta oo aan ka xumahay inaan sidaas idhaahdo, 97% kharribayaasha ayaa doorbidaya Android, laakiin miyaad taqaan sababta?
Kaararka hadiyada ee Google Play ayaa hadda laga heli karaa Mexico
Laga soo bilaabo dhowr xarumood waxaad horey uga iibsan kartaa kaararka hadiyadaha Google Play ee Mexico.
Ku dheji waxyaabo badan oo badan oo leh 'AllCast' Dropbox nooca cusub
Hadda waxaad ka ciyaari kartaa waxyaabo badan oo badan oo leh 'AllCast' Dropbox oo leh nooca cusub ee maanta la sii daayay
7-da xirmo ee ugu fiican ee Android
Waxaa jira xirmooyin badan oo icon ah oo ku saabsan Android, laakiin toddobadan ayaa noqon kara mid ka mid ah kaas oo siinaya qalabkaaga habeynta la doonayo.
Taageerada baakadka Icon ee Themer Beta oo leh nooca cusub
Xidhmada 'Icon' ee ku jirta Themer mahadsanid cusboonaysiinta ugu dambaysa ee codsigan MyColorScreen oo ku siisa muuqaal aan caadi ahayn taleefankaaga Android.
Sida loo muujiyo isku xirka WiFi sida Hotspot-ka ku yaal Android si looga fogaado cunista xad dhaafka ah
Haddii aad ku xirnaato terminal aan-ahayn Android ama modem leh xogta moobiilka, Android waxay u fahamsan tahay inay tahay xiriir WiFi ah. Maanta waxaan ku baraynaa inaad u muujiso inay yihiin dhibco kulul.
Intii aan ka helnay wicitaannada codka WhatsApp, halkan waxaa ku yaal waxyaabo kale oo xiiso leh
Halkan waxaad ku haysaa waxoogaa beddelaad ah inta aan ka helayno adeegga wicitaanka codka ee muddada dheer la sugayay ee WhatsApp.
Koorso bilaash ah oo lagu barto sida loo isticmaalo Google Apps Script
Google Developers Hackademy waxay abuurtay koorso cusub oo bilaash ah. Markan waxay hordhac u tahay Qoraalka Google Apps.
Sida loo shakhsiyeeyo waraaqaha ranjiga ama darbiyada leh taabashada farshaxanka
Waxay u badan tahay in isticmaaleyaal badan oo Android ah ay jecel yihiin awoodda loo habeeyo OS-ga. Maanta waxaan sii wadnaa tallaabo dheeraad ah oo leh barnaamijyada kuu oggolaanaya inaad qaabeeyaan waraaqaha ranjiga.
Sida loo helo Muuqaalka si aad uguhesho Android
Marka xigta waxaan sharxayaa sida loo waafajiyo Muuqaalka 'Android' oo aan u dhiman isku dayga.
Kala soo bax barnaamijyada Google Play adigoon lahayn akoon Google ah oo leh Download Download APK
Google waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii ay dadku u isticmaali lahaayeen wax soo saarkooda, mana noolaan karaan iyagoo aan xitaa haysan akoon Gmail ah. Ilaa xadna way ku guulaysatay, maadaama maalmahan midkeenna aanu noolaan karin la'aanteed mashiinka raadinta Giant Google. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira faahfaahino laga hortagi karo. Tusaale ahaan markii aad aadid dukaan oo aad isku daydo inaad tijaabiso kaniiniga aad jeceshahay inaad iibsato. Maxaa dhacay? Taasi haddii aad rabto inaad ogaato sida ciyaar ugu socon laheyd kiniinkaas, waa inaad yeelataa geesinimo si aad xisaabtaada gmail ugu dhigto shabakadda Wi-Fi ee dukaankaas, iyo xitaa in ka badan, waxay halis ugu jirtaa inaad ilawdo inaad baxdo hadhow. Ama sameyso akoon cusub. Sababtaas iyo dhowr sababood oo kale, maanta waxaan ka hadlaynaa xalka cajiibka ah: Download APK.
[APK] Router Keygen ama sida loo helo internet bilaash ah oo laga helo Android
Router Keygen waa codsi naga caawin doona helitaanka internet bilaash ah oo ku shaqeeya Android. Halkan waa iskuxirka si aad u soo dejiso apk.
Muusiga Muusiga wuxuu Chrome u rogaa muusigga muusigga
Laga soo bilaabo Google Play Music wuxuu leeyahay hawl tijaabo ah oo noo oggolaaneysa inaan Google Chrome u beddelno muusig muusiko.
Kiiboodhka Fleksy waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.0 oo leh mowduucyo cusub, habeynta Cloud iyo inbadan
Kiiboodhka Fleksy wuxuu noqon karaa beddelka aad raadineysay haddii kumbuyuutarkaagu uusan ku qancin.
Sida looga warbixiyo waxyaabaha aan habooneyn Dukaanka Play
Halkan waxaad kuheleysaa cashar fudud si aad u ogaato sida loo soo sheego waxyaabaha aan habooneyn ee ku jira Play Store.
Twitter-ka ee 'Android' wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku calaamadeysatid isticmaaleyaasha sawirro isla markaana aad dhowr jeer isla mar soo geliso nooca cusub
Laba astaamood oo cusub oo muhiim ah nooca cusub ee Twitter ee loogu talagalay Android, sida sawirro badan oo la soo rogay iyo suurtagalnimada astaamaha isticmaalaha.
Sidee loo abuuraa liis cusub oo warbaahineed oo WhatsApp ah maxaa loogu talagalay?
Kadib waxaan kaaga tagi doonaa dhammaan tillaabooyinka aad raacayso si aad ugu abuurto liis cusub oo ah qaybinta WhatsApp iyo waxa ay noo samayn doonto.
3 waxyaabood oo maskaxda lagu hayo ka hor inta aan barnaamijyada si badbaado leh loogu rakibin Android
Ku rakibida barnaamijyada aan ku siineyno rukhsadaha waa wadada ugu weyn ee infekshinka ee amniga Android. Maanta waxaan ku siineynaa 3 talooyin si aad isaga ilaaliso.
Digniinta Android!: Bug wuxuu saameeyaa Google Play iyo KOs Android 4.0 ama qalab ka sareeya
Cayayaanka Google Play waxay u oggolaaneysaa cilmi-baare inuu abuuro ka-faa'iideysi taas oo, marka lagu daro ka-xannibaadda marin-u-hellayaasha horumarineed ee Google Play, u oggolaanaysa lebenka.
[APK] Isku qas Raadiyaha Nokia X dhammaan Android 4.1.2 ama wixii ka sareeya
Halkan waxaan kaaga tagayaa inaad si toos ah uga soo dejiso apk Nokia Mix Radio apk, codsi aan caadi ahayn oo hadda u shaqeynaya terminaallada kale ee Android.
Sida loo daawado Sevilla - Real Madrid si bilaash ah adigu adigu iska leh 'Roja Directa'
Kadib waxaan sharxayaa sida loo daawado Sevilla - Real Madrid oo bilaash ah oo caawa la ciyaaro iyada oo loo marayo codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android.
2 siyaabood oo kala duwan oo loo rujin Android oo aadan u seegi karin
Halkan waxaad ku haysaa dhowr siyaabood oo jaanis ah oo aad ku heli karto Root Android qaab fudud oo fudud xitaa tan ugu murugsan.
Barnaamijyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android: Maanta Fintonic
Fintonic waa la taliye maaliyadeed oo loogu talagalay Android kaas oo naga caawin doona inaan la wareegno dhaqaalaha qoyskeena adoo abaabulaya isla markaana nala taliyaya waqtiga dhabta ah.
BlinkFeed Launcher ee HTC One ayaa laga heli karaa dhammaan Android
Halkan waxaad ku haysataa sida loo tijaabiyo Launcher-ka caanka ah ee ka kala duwan noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'HTC One' oo ku yaal terminal kasta oo Android ah, BlinkFeed Launcher ayaa hadda loo heli karaa terminal kasta.
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah: Maanta Faraha Gaabinta Furaha
Faraha Shorcut Launcher waa Launcher dareen leh oo loogu talagalay Android kaas oo u adeegsada teknolojiyad tilmaam ah inuu ugu yeero codsiyada si dhakhso leh oo hufan.
Halkan waxaan si toos ah kaaga tagayaa apk-ka nooca ugu dambeeyay ee laga heli karo Android Play Store.
Qayb cusub oo ka mid ah Dukaanka Play-ka si loogu faafiyo barnaamijyada soosaarayaasha waddan ahaan
Google waxay tijaabineysaa qeyb cusub oo ka mid ah Play Store si ay u muujiso codsiyada ay abuureen horumariyeyaasha iyadoo loo eegayo gobolka aan ku jirno
Sida looga daawado Madrid-Barça internetka oo aan u dhiman isku dayga
Halkan waxaad ku haysaa dariiq sharci ah oo aad ku daawan karto ciyaarta Madrid-Barça anaga noo gaar ah Android Smartphone ama Tablet iyo gebi ahaanba bilaash
Halkan waxaad ku leedahay qaab kaa caawin doona inaad rakibato barnaamijyada Google ee asaliga ah sida Play Store adigoon haysan dib u habeyn wax ka badal ah.
[APK] Soo dejiso nooca ugu dambeeyay ee la heli karo ee Hangouts
Halkan waxaad kuheysaa noocii ugu dambeeyay ee Hangouts iyo Google Play Services oo si toos ah loogu heli karo qaabka APK ee gacanta lagu rakibo.
Habka immersive ee Android 4.4: sida loogu qasbo barnaamijyada inay ku dabaqaan
Haddii aad taqaanid qaabka loo yaqaan 'Android 4.4 immersive' si aad ugu raaxeysato shaashadda buuxda, maanta waxaan kuu sheegeynaa sida aad ugu dhaqaajiso barnaamijyada aan ku habbooneyn.
Sida loo xaliyo dhibaatada Sdcard ee Android 4.4 Kit Kat
Halkan waxaad ku haysataa hab fudud oo lagu xalliyo dhibaatada aan ka helno Android 4.4: Kit Kat si codsiyada u isticmaali karaan Sdcard-ka dibedda
Sida ugu dhaqsaha badan Android si lamid ah Apple ee iOS 7.1
Haddii aad rabto inaad xawaare yar ku haysato Android, maanta waxaan kuu sheegeynaa sida loo sameeyo Android dhaqso leh si la mid ah Apple on iOS 7.1.
Telegram-ka loogu talagalay Android waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.4.0 wuxuuna hadda oggolaanayaa qoraalada codka
Waxaan horeyba u haysanay noocii ugu dambeeyay ee Telegram ee loogu talagalay Android oo leh muuqaalka cusub ee codka Memora.
Hadda Browser waa biraawsar shabakad loogu talagalay Android oo leh taageerada Flash
Ma jiraan daalacayaal shabakadeed oo badan oo bixiya taageerada Flash, markaa tan cusub ee hadda Browser waxay noqon doontaa beddel weyn.
SDFix waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha KitKat inay dib ula soo noqdaan gacan ku haynta kaarkooda SD
Google waxay ku qasabtay xayiraado gaar ah kaarka SD-ka ee ku jira Android 4.4 KitKat, barnaamijkan SDFix-na waxaan awoodi doonnaa inaan dib ula soo noqono kantaroolka.
Ogow oo u isticmaal habka wax lagu barto ee ku saabsan Android-kaaga
Ka faa'iideyso shaashaddaada 'android' adoo adeegsanaya hab immersive ah iyadoon loo eegin inaad xidid tahay iyo in kale.
Digniinta Android !! furin cusub oo saameyn doonta Android iyo Windows
Warku wuxuu nagu soo gaadhayaa furin cusub oo laga soo saaray Android taas oo saamayn ku yeelan karta kombuyuutarradeena shaqsiyadeed ee wata nidaamyada hawlgalka ee Windows isla waqtigaas.
Barnaamijyada cajiibka ah ee Android: Maanta Tango
Haddii shalay aan kuu sheegay wax ku saabsan Tango iyo maalqabeen maal gashan helay, markii aan ku tijaabinayay terminal-kayga Android ma iska caabin karin ku talinta barnaamijka.
MarkAsRead for Gmail waxay dhigtaa astaan ​​astaan ​​u ah sida loogu akhriyo ogeysiisyada Gmail
Laga soo bilaabo barta ogeysiiska, oo leh MarkAsRead ee Gmail waxaad ku calaamadeyn kartaa emaylka Gmail sida loo akhriyey.
Tango for Android waxay ka soo baxdaa dambaskeeda sida Phoenix
Waxaan ku helnaa wararka maalgashiga weyn ee Tango ee loogu talagalay Android koox ka mid ah shirkadaha Shiinaha oo alibaba.com ay tahay Amazon-ka Shiinaha.
Caawiyaha ugu fiican ee Android-keena ayaa horeyba loogu rakibay heer ahaan waxaana lagu magacaabaa Google Search ama Google Now
Waa kuwan amarrada codka ugu muhiimsan ee lagu adeegsado Google Now.
Sidee WhatsApp u shaqeeyaa?
In kasta oo ay tahay farriinta farriinta heer sare ah, maanta waxaan si fudud kuugu sheegaynaa sida WhatsApp ay uga dhex shaqeyso gudaha si aad ugu dirto farriimahaaga.
[APK] Kiiboodhka Google ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.0 oo ay ku jiraan horumarin badan
Halkan waxaad ku haysaa nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee kiiboodhka Google ama Keyboard Google si toos ah apk loogu talagalay cusbooneysi toos ah.
Facebook wuxuu tijaabiyaa bar ogeysiis cusub oo joogto ah oo leh sawir muuqaal ah
Baarka ogeysiiska, mid ka mid ah Facebook laftiisa ayaa wada noolaan kara toobiyeyaasha oo ay ku jiraan sawirka astaanta.
Kaadhadhka hadiyadaha ee Google Play ayaa hadda si rasmi ah looga heli karaa Spain
In kasta oo ay muddo dheer ku sugnaayeen waddamo kale, kaararka hadiyadaha ee Google Play ayaa haddaba laga heli karaa Spain si looga iibsado dukaamada Fnac.
Raadinta Google waxaa lagu cusbooneysiiyaa amarrada codka «Sawir Qaad» iyo «Diiwaan geli fiidiyoow»
Raadinta Google waxay leedahay laba amar oo cod oo cusub si loo soo bandhigo arjiga kaamerada sida "Sawir qaado" iyo "Diiwaan fiidiyow"
5 barnaamij si aad uga faa iideysato Chromecast
Chromecast hadda waxaa laga heli karaa Isbaanish si uu noogu soo bandhigo suurtagalnimada in lagu ciyaaro waxyaabo badan oo badan oo shaashadda telefishanka ah.
Barnaamijyo yaab leh oo loogu talagalay Android, Maanta dodol Locker
Dodol Locker waa ikhtiyaar lagu daro dodol Launcher taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan si buuxda u bedelno isdhexgalka shaashadda furitaanka.
GPS-ka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android, Maanta No-On-Road
Be-On-Road waa GPS loogu talagalay Android oo noo oggolaanaysa hawlo badan oo cusub sida gaar ahaanta u qaabeynta gawaarida waaweyn.
Kaqeybgal barnaamijka beta Messenger ee Facebook Messenger
Waxaan ku tusineynaa sida looga qeyb qaato barnaamijka 'Messenger Messenger' ee 'beta beta program'.
'' Genius Scan '' ayaa suurtogal ah inuu yahay aaladda dokumentiga ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
'' Genius Scan '' ayaa suurtogal ah inay tahay codsiga ugu wanaagsan ee noociisa ah ee loogu talagalay Android sababo la xiriira fudeydkiisa iyo tikniyoolajiyadda xoogga leh ee ay ku leedahay sawirrada sawirada
Feejignaanta Android !!: Fure Android waa mid ka mid ah kuwa ugu baahsan, xitaa haddii kaliya ka baxsan yahay Play Store
Maqaallo badan oo qaylo-dhaan ah oo ku saabsan qaabka Android Alert !! Waxaan ku helay naftayda shabakadda guud ee dhibaatada codsiyada cudurka qaba ee Android.
Barnaamijyo yaab leh oo loogu talagalay Android, Maanta dodol Launcher - telefoonka qurxinta
Dodol Launcher waa codsi cajiib ah oo loogu talagalay Android kaas oo gebi ahaanba beddeli doona qaabka isdhexgalka ama desktop-ka ugu weyn ee bartayada Android.
Nooca beta ee cusub ee WhatsApp 2.11.193 ayaa laga heli karaa boggaaga
Halkan waxaan kuugu keenayaa nooc kale oo cusub oo WhatsApp ah, waqtigan oo ah nooca 2.11.193 oo ah nooca beta wali.
Qalabyo wax ku ool ah oo loogu talagalay Android, Maanta Waze Up - Waze on top
Waze Up - Waze on Top waa codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo waxtar weyn u yeelan doona dhammaan isticmaaleyaasha Waze.
Ka soo dejiso nooca ugu dambeeya ee laga heli karo Play Store, v 4.6.16 oo leh horumarin badan
Halkan waxaan si toos ah kaaga tagnay apk si toos ah loogu soo dejiyo loona rakibo nooca ugu dambeeya ee laga heli karo Google Play Store
Sida loo dalbado oo loo habeeyo shaashaddaada Android (Casharrada loogu talagalay dadka cusub)
Haddii aad rabto inaad haysato aaladdaada wax yar oo abaabulan, markaa ma seegi kartid casharka cusub ee maanta ee loogu talagalay hagaajinta iyo dalbashada Android.
[APK] Kala soo bax nambarkii ugu dambeeyay ee You Tube ee loogu talagalay Android iyada oo horumar badan la sameeyay
Halkan waxaan si toos ah kaaga tagayaa apk-ka You Tube ee loogu talagalay Android qaybteeda ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay iyadoo ay ugu mahadcelinayaan ragga ka socda Booliska Android.
Barnaamijyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, Maanta Siri ee loogu talagalay Android
Siri for Android waa codsi aan caadi aheyn oo loogu talagalay kaaliyaha nooca nooca ah ee Android oo aan waxba ka hinaasin arjiga Apple.
Play Store iyo iibkaaga In-App, Ka taxaddar 30-ka daqiiqo ee nacaladda leh!
Kahor intaanan uga tegin terminaalkeena kuwa yaryar, qawaaniinta amniga qaarkood waa in la buuxiyo, kan ugu horreeya ee lagu ilaaliyo Bakhaarka Play-ka lambarka sirta ah, in kastoo ...
Barnaamijyada fariimaha deg dega ah ee fool-ka-fool ah
Waxaan isbarbar dhigey awooda iyo daciifnimada barnaamijyada fariimaha ugu caansan sida: Telegram, BBM, Hangouts iyo WhatsApp.
Sidee looga helaa barnaamijyada Android iibka Google Play?
Haddii aad hadda timid adduunka Android oo aadan aqoon sida loo helo iibka Google play, maanta waxaan ku tusineynaa sida loo iibsado barnaamijyada Android.
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah, Maanta Glimmer
Glimmer waa codsi nooca saacadda digniinta ah laakiin gebi ahaanba ka duwan wixii aad illaa hadda ku aragtay Android, oo loogu talagalay baraarujinta dabiiciga ah.
Instagram waxaa lagu cusbooneysiiyay istcimaalo isticmaale leh muuqaal Android ah
Instagram waa shabakada ugu caansan sawir qaadista bulshada meeraha waxayna ku cusbooneysiisaa codsigeeda android adeegsiga cusub ee isticmaalaha.
Codsiyada aan macquul ahayn ee loogu talagalay Android, Maanta kumbuyuutar Android ah oo leh shaqooyin badan oo dheeri ah
Kiiboodhka aan maanta kuugu soo bandhigeyno codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android waxaa ka buuxa shaqooyin sida kuwa aan ka helno kumbuyuutarka kumbuyuutarka.
Ku rakib Nokia X Launcher on kasta oo Android ah
Halkan waxaad ku leedahay Launcher loo yaqaan Launcher 7 kaas oo na siin doona muuqaalka dhammaystiran ee is-dhexgalka loo adeegsaday noocyada Nokia X iyo Windows Phone terminals.
Mawduucyada 'Xperia Themes' ee loogu talagalay taleefannada casriga ah ee 'Sony' ee wata 'Android 4.3' ama ka sareeya
Mawduucyada 'Xperia Themes' hadda waa la heli karaa haddii aad leedahay taleefan Sony ah oo wata Android 4.3 ama ka sareeya.
Maareeyaha Android si aad u xakameyso Android-kaaga Windows PC, Linux iyo Mac
Halkan waxaad ku haysaa xal xiisa leh oo aad ku maamuli karto Android-ka kombiyuutar kasta oo shaqsi ah. Magaceeda Maamulaha Android.
Sida loo xakameeyo isticmaalka weyn ee qorshaha xogta
In kasta oo ay si gaar ah u xiiso badan tahay in la helo qaddarka internetka ee moobiilka, sii-haynta xakamaynta isticmaalka qorshaha xogta waa muhiim.
Codsiyada cusub ee Android, Maanta Fenix ​​ee Twitter
Fenix ​​ee Twitter waa macmiil cusub oo Twitter ah, in kasta oo ay ku jirto beta ama marxalad horumarineed oo buuxda, waxay u ballanqaadaysaa fursado badan oo wanaagsan oo loogu talagalay Twitter.
Whatsapp 2.11.186 waxaa laga heli karaa Play Store
Nooc kale oo cusub oo WhatsApp ah ayaa ka muuqda dukaanka codsiyada Android, Play Store oo leh nambarka nooca 2.11.186
Sida loo kordhiyo batterigaaga terminal-ka Android (Waxbarid loogu talagalay dadka cusub)
Ismaamul la'aanta waa dhibaato daran. Maanta waxaan la laabaneynaa Tababar loogu talagalay dadka cusub oo waxaan sharxeynaa sida loo dheereeyo batteriga korontadaada.
Cyberlink's PhotoDirector hadda waxaa laga heli karaa Play Store
PhotoDirector waa tifaftiraha sawirka Cyberlink, abuurayaasha PowerDVD, kaas oo si gaar ah ugu yimaada Android kiniiniyada.
Ku rakib barnaamijka 'NOKIA X launcher' adiga oo aan xidid ahayn
Ku rakib Nokia X launcher qalab leh Android JB ama ka sareeya adigoon xidid ahayn.
Kheyraadka Android iyo caalamiyeynta
Barashada isticmaalka aasaasiga ah ee kheyraadka ku jira Android, oo ay ku jiraan qoraallada, sawirrada cufnaanta kala duwan, iyo caalamiyeynta.
U wareeji Android-kaaga Nintendo DS, NDS
Maanta waxaan ku barayaa sida loo rogo Android-keena xagga kombiyuutarka la qaadan karo ee Nintendo, Nintendo DS ama NDS.
Si toos ah kala soo bax nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee WhatsApp degelkeeda
Halkan waxaan kaaga tagayaa habka aad haysato nooca ugu dambeeya ee WhatsApp ka hor intaan xitaa laga heli karin Android Play Store.
U wareeji terminal-kaaga Android PSP
Qoraalkan waxaan kuugu sharraxayaa tallaabo tallaabo ah sida loogu beddelo boosteejooyinkaaga 'Android' PSP awood leh.
Sidee loo xiraa loona tirtirayaa barnaamijyada ku saabsan Android?
Mar labaad casharka loogu talagalay qaybta cusub ee loo yaqaan 'Androidsis Newbies' waxaan ku sharaxaynaa waxyaabaha aasaasiga u ah taleefankaaga Android waxaanan ku bari doonaa sida loo xiro loona tirtiro barnaamijyada.
Sanad guurada Google: Ku soo dejiso BIG filimka Tom Hanks bilaash
Google Play si loogu dabaaldego sanadguuradiisa ayaa ku siineysa waqti xaddidan filimkii 80-kii ee BIG, oo uu jilay Tom Hanks.
Fing - Qalabka Shabakadda ayaa noo oggolaanaya inaan si faahfaahsan u ogaanno cidda adeegsata shabakaddayada WiFi
Fing - Qalabka Shabakadu waa bilaash waxayna kuu ogolaaneysaa inaad si faahfaahsan u ogaato cidda adeegsata shabakadeena WiFi.
Blimps, Dialer sabayn leh xulashooyin aad u xiiso badan
Maanta waxaan rabaa inaan kuu soo bandhigo Blimps, Dialer sabeyn u ah android oo balan qaadaya shaqooyin xiiso leh aaladaha Android.
Dhibaatada WhatsApp ee cusbooneysiinta Google Play iyo barnaamijka laftiisa
WhatsApp ayaa ku jirtay bushimaha qof walba toddobaadyadii la soo dhaafay iyada oo la yaab leh in Facebook ay ku iibsatay muuqaal cabsi badan
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah, Maanta Calibration Battery
Maanta waxaan rabay inaan ku daro Battery Calibration buugga buugga Codsiyada Cajiibka ah ee loogu talagalay Android, iyadoo ay ugu wacan tahay adeeggeeda weyn ee dayactirka batteriga.
Si toos ah abk u soo dejiso nooca ugu dambeeya ee Google Play Music
Halkan waxaa ku yaal xiriiriyaha tooska ah ee lagu soo dejinayo apk-ka nooca ugu dambeeyay ee Google Play Music for Android.
Waa maxay .apk sideese loo adeegsadaa?
Waxaan kusii wadeynaa qaybta casharka ee loogu talagalay dadka cusub iyo kiiskan waxaan kahadleynaa rakibida codsiyada ee buug gacmeedka kujira booggeena Android oo leh .apk
Kaamirada Sony Xperia Z2 ayaa loo geeyay aaladaha kale ee Xperia
Haddii aad haysato qalab Xperia ah waad rakibi kartaa kaameradda laga soo qaado Xperia Z2 ee la bixinayo oo ay ka mid yihiin astaamaha kale.
CM Security, waa anti-virus dhameystiran oo loogu talagalay Android
CM Security waa anti-virus ka hortaga Android oo na siiya ilaalin dhab ah oo dhameystiran oo loogu talagalay terminaalkeena Android.
Flipboard wuxuu ku darayaa ikhtiyaarka nooca cusub inuu soo galo Google+
Noocan cusub waxaad hadda ka gali kartaa Flipboard-ka Google+, adoo ka dhigaya waxyaabo fudud markaad isticmaaleyso qalab badan.
Kaamiradda Aragga Habeenkii weli waa laga heli karaa Dukaanka Play-ka, aad u taxaddar!
Waxay umuuqataa mid layaableh in 24 saac kadib iyo faallooyinka ay Leedahay Kaamirada Aragtida Habeenku, ay wali diyaar u tahay in lagala soo baxo Play Store.
Mailbe.at, macmiil iimayl qaali ah oo loogu talagalay Android
Maibe.at waa macmiil iimayl dhab ah u maareeya xisaabaadkayaga si ka duwan kan aan ku leenahay Android-ka.
Maxay yihiin isdhexgalka isticmaaleyaasha soosaarayaasha 'Android'?
Waxaan sii wadaynaa inaan ku dhex milicsano adduunka Android iyadoo la siinayo casharro loogu talagalay dadka cusub, maantana waxaan sharraxeynaa fikradda is-dhexgalka isticmaaleyaasha soosaarayaasha.
Barnaamijyo yaab leh oo loogu talagalay Android, Maanta Farxad Rinjiga - Midabka & Sawirka
Rinjiga Rinjiga - Midabka & Sawirka waa codsi xasaasi ah oo cajiib ah oo loogu talagalay nooca Rinjigaaga Android oo gebi ahaanba xor ah.
Ku hubi cida ka ciyaareysa wareeggaaga Google Play Games v1.5 [APK Download]
Nooca cusub ee Ciyaaraha Google Play wuxuu bixiyaa, waxyaabo kale, suurtagalnimada in la ogaado cidda ka ciyaareysa wareegyadaada.
Google wuxuu cusbooneysiiyaa Qoraal-ku-Hadal (TTS) codad qeexitaan sare leh iyo wax badan [Download APK]
Nooca cusub ee Qoraalka-Ku-Hadalka ah ee TTS wuxuu keenaa codad qeexitaan sare leh, hagaajinta UI iyo taageerada luqadaha cusub.
5-ta antivirus ee bilaashka ah ee ugu wanaagsan Android
Waxaa jira antivirus fara badan oo si fiican u fuliya shaqada bixinta amniga taleefanka, laakiin waxaa jira shan bilaash ah oo ugu fiican.
Codsi loo maleynayo inuu yahay mid xaasidnimo ah ayaa hadda la soo sheegay oo weli ku jira Bakhaarka Play-ka oo magaciisuna yahay Kaamiradda Aragga Habeenkii.
Webogram, nooca Telegram si loogu rogo Chrome
Webogram waa kordhin ama codsi loogu talagalay Chrome-ka oo noo ogolaanaya inaan ku isticmaalno Telegram-ka shabakadda Google.
Feejignaanta Android!: TOR Trojan oo loogu talagalay Android ayaa la ogaaday
Sida laga soo xigtay warbixinnada sheybaarada Kaspersky, Android Trojan cusub ayaa la soo saaray taas oo ka dhigaysa qarsoodi shabakadda TOR inay u adeegto.
Barnaamijyo Cajiib ah oo loogu talagalay Android, Maanta oo loo soomo Facebook
Fast For Facebook waa codsi lagu xakameynayo Facebook-gaaga qaab aan rasmi ahayn iyo xulashooyin badan oo qaabeyn iyo aragtiyo ka badan barnaamijkii asalka ahaa.
Sida loo wareejiyo Faylasha ka socda Android ee Computer - Casharka loogu talagalay Newbies
Maanta waxaan mar kale ka hadlaynaa casharro loogu talagalay kuwa bilowga ah oo aan ku sharaxeyno sida faylasha looga wareejiyo Android-ka kombiyuutarka siyaabo kala duwan.
Sidee loo qaadaa shaashadda Android? - Casharro loogu talagalay dadka cusub
Haddii aad rabto inaad sawirro ka qaaddo waxa ka dhacaya shaashaddaada moobaylka, maanta waxaan kuu sheegaynaa sida loo qaado shaashadda 'Android' ee casharro kale oo loogu talagalay kuwa cusub.
Barnaamijka softiweerka ee Sony ee 'Socialife news' ayaa laga heli karaa qof kasta oo ka mid ah Dukaanka Play
Socialife waa codsi gaar ah ee Sony u leedahay aqrinta wararka maanta laga bilaabay Play Store.
[PORT] Nokia Email ayaa loo heli karaa aaladaha kale ee Android
Halkan waxaad ku haysataa PORT cusub oo ah codsi hooyo oo ka mid ah taxanaha Nokia X, markanna waa barnaamijkii Emailka ee Nokia ee wixii Android ah.
Soo dejiso oo rakib Keyboard Google leh sadarka shanaad oo karti leh
Halkan waxaad ku haysaa Keyboard-ka Google, kiiboodhka asalka ah ee Google laakiin leh lambar shanaad oo karti leh.
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah, ayaa maanta Dhiirrigelinaya Launcher
Inspire Launcher waa Launcher bilaash ah oo loogu talagalay Android 4.2 oo na siiya khibrad Kit Kat ah inkasta oo ay ku jiraan hawlo gaar ah sida Genius Bar.
[Port] Nokia Music Player oo ah Nokia X player muusig ah oo taxane ah
Halkan waxaan kaaga tagnay APK-ka mid kale oo ka mid ah codsiyada asaliga ah ee Nokia X kala duwan oo leh Android, markanna muusigga muusigga ah.
Beddelka ugu wanaagsan ee WhatsApp wuxuu ku jiraa mobilkaaga waxaana loo yaqaan 'Google Hangouts'
Hangouts waa mid ka mid ah barnaamijyada isku dhafan ku dhowaad wixii Android ah iyo bedelka dabiiciga ah ee WhatsApp.
Google URL Gaabin si loo soo gaabiyo URL-yada hadda laga heli karo Play Store
Codsiga Gaaban ee URL Google ee soo gaabinaaya URL-yada ku jira terminalkaaga Android ayaa hadda laga heli karaa Play Store si loo soo dejiyo.
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah, Maanta Qiimeyn Qalbi Runtastic ah
Qiyaasta Wadnaha Runtastic ayaa noo oggolaan doonta, iyada oo loo marayo kaameradda sawirrada ee terminaalkeenna Android, si aan awood ugu yeelano inaan xakameyno xaddiga wadnaheena.
Sida loo xaliyo dhibaatada maqnaanshaha meel ka baxsan gudaha Android
Xusuus la'aan qalabka Android waa dhibaato. Maanta waxaan sharraxeynaa sida loo xalliyo dhibaatada la'aanta meel xusuus ah oo ku jirta Android.
Sida loo abuuro sawir isku dhafan oo leh thumbnails sawiro kale adoo isticmaalaya kaliya Android-kaaga
Maanta waxaan kuu sharaxayaa talaabo talaabo ah sida loo abuuro sawir ka kooban sawir ku saleysan sawirro muuqaal ah ama sawirro kale oo ka socda Android-keena.
Sida loo xaliyo dhibaatada LED-ka ee aan shidanayn Motorola Moto G
Haddii aad soo iibsatay Motorola Moto G oo aad aragto in uusan LED-ku shidanayn ama aad dhibaatooyin la kulantid, waxaan kuu sheegi doonaa sida loogu xalliyo abka rasmiga ah.
Waxaan tijaabinay Lenovo S860 terminal leh batari dhan 4000mAh
Waxaan joognaa MWC 014 waxaan tijaabineynaa terminal-ka Lenovo, gaar ahaan S860 oo u taagan baterigiisa weyn ee 4000mAh oo balan qaadaya ismaamul weyn.
Hadda waad ku qarin kartaa ogeysiisyada kooxda WhatsApp
WhatsApp ee cusbooneysiintii ugu dambeysay ayaa isku darsaday ikhtiyaarka ah in lagu aamusiyo ogeysiisyada kooxda. Ikhtiyaar ay inbadan dalbanayeen.
Google+ waxay ku heshaa nooc cusub oo daabacan aalado kala duwan iyo inbadan
Nooc cusub oo Google+ ah oo kuu oggolaanaya inaad ku sawirto sawirro adoo adeegsanaya aalado kala duwan oo ah muujinta cusbooneysiintan cusub.
Google wuxuu bilaabayaa Google Now Launcher ilaa Play Store [APK Download]
Google Now Launcher ayaa ugu dambeyntii laga heli karaa Play Store ka dib markii loogu magac daray casriyeyntii ugu dambeysay ee Google Search.
3 Icon Xidhmo si aad u habeyso casrigaaga Android
Waxaan ku dhex soconeynaa Google Play anigoo raadineyna qaaciidooyin si aan taleefankaaga casriga ah uga dhigno midkaaga waxaanan soo qaadaneynaa 3 Baako oo walxood ah si aad shakhsi uga dhigato casrigaaga Android.
Samsung waxay ku dhawaaqday Ultra Power Saving Mode: 24-saac nolosha batroolka oo ah 10% lacag
Si ay uga sii walwalaan madax-bannaanida, MWC 2104, Samsung waxay soo bandhigtay Ultra Power Saving Mode ee Galaxy S5, oo soo saarta 24 saacadood 10% xamuulka.
Maxay yihiin hababka lagu cusbooneysiiyo aaladda Android?
Casharkeena maanta waxaan kuu sheegi doonaa qaababka loo cusbooneysiin karo aaladaha Android, anagoo sharxeyna habka OTA kuna soo dejisanayna kumbuyuutar.
Sida loo nadiifiyo xogta keydka barnaamijka ee Android
Waxaan ku sii wadaynaa casharrada Android ee loogu talagalay cusub ee ku jira Androidsis kiiskan waxaan ku barinaynaa sida looga nadiifiyo xogta kaydka dalabka ku saabsan Android.
Sida loo xakameeyo galaaska 3G iyo WiFi ee barnaamij kasta shaqsi ahaantiisa
Haddii aad rabto inaad ka hortagto barnaamijyada qaarkood inay ku xirmaan shabakadaha WiFi ama 3G ama si shaqsi ah u beddelo isku xirnaanta doorbid, Firewall aan lahayn xidid ayaa ah barnaamijkaaga.
Hubi cidda ku xiran shabakaddaada WiFi ee leh Fing for Android
Fing for Android waa aalad awood leh oo lagu maareeyo shabakadaada WiFi isla markaana si dhakhso leh loo ogaado cidda ku xidhan.
Opera Max wuxuu ka tagayaa beta-ka waxaana hadda laga heli karaa Play Store
Opera Max waxay ujeedkeedu tahay inuu naga badbaadiyo ku dhowaad 50% xogta adoo isku cadaadinaya fiidiyowga, sawirrada iyo qoraalka ku jira codsiyada aan isticmaalin xogta sirta ah.
Soo dejiso Lenovo Super Camera 3.5.6, oo ah barnaamijka ugu fiican ee xilligan la joogo
Halkan waxaan kaaga tagayaa inaad si toos ah u soo dejiso nooca ugu dambeeya ee barnaamijka 'Lenovo Super Camera application', oo suurtogal ah inuu yahay kaamirada ugu fiican Android-kaaga
WhatsApp for Android hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad qariso waqtiga xiriirka ugu dambeeya
Suurtagalnimada in la qariyo waqtiga ugu dambeeya ee isku xirnaanta, iyo sidoo kale sawirka ama xaaladda, ayaa hadda laga heli karaa WhatsApp-ka Android.
Shan bedel oo bilaash ah WhatsApp
WhatsApp waxaa ku iibsaday Facebook lacag dhan 19000 milyan oo doolar, maaddaama shabakadda bulshada ay leedahay dad wax u dhimaya, waxaan soo jeedineynaa shan beddel oo halis ah.
Visa iyo MasterCard waxay ku dhawaaqayaan taageerada lacagaha NFC ee Android 4.4 KitKat
Visa iyo MasterCard, labada lacagood ee ugu badan ee kaararka ah, waxay u soo baxayaan Android 4.4 KitKat si loogu isticmaalo isku xirnaanta NFC.
Top 10 Kordhinta Muzei Live Waraaq
Muzei waa Waraaq Live ah ama asal animated ah oo leh kordhin ballaadhan ayaa kuu oggolaanaysa inaad ku haysato sawirrada ugu fiican miiska taleefankaaga.
Lucky Boot Animator, si fudud u abuur bootanimation-kaaga gaarka ah
Lucky Boot Animator waa barnaamij loogu talagalay Windows kaas oo noo ogolaanaya inaan si fudud ugu abuurnno animations kabaha caadada u ah Android-keena.
Sida loola wadaago waxyaabaha ku jira dhowr shabakadaha bulshada isla mar ahaantaana loo wadaago Shareboard
Shareboard waa codsi wali ku jira horumar buuxa oo na siinaya waxqabadka wadaagida dhamaan shabakadahaaga bulshada hal mar
Sidee loo hagaajiyaa xannibaadda WhatsApp sababo la xiriira feyraska
Fiidiyow faafiyay fayras ayaa weeraraya xisaabaadka WhatsApp ee lagu soo saaro, xadaya xiriirada iyo xira barnaamijka. Waxaan ku tusaynaa sida loo saaro.
Sida loo kiciyo Adobe Flash Player ee Android 4.4
Haddii aad rabto in biraawsarkaagu awood u yeesho inuu socodsiiyo waxyaabo dheeri ah oo u baahan Adobe Flash Player, maanta waxaan ku tusineynaa sida loo xoojiyo shaqada ku jirta Android 4.4.
Sida loo beddelo guryaha Motorola Moto G
Mid ka mid ah terminaalda ugu raqiisan Android, Moto G wuxuu siiyaa dhibaatooyin dadka isticmaala, maantana waxaan ku tusinaa muuqaal ahaan Sida loo badalo guryaha Motorola Moto G.
Sidee looga fogaadaa kharashyada si qalad ah barnaamijyada Google Play?
Ma jeceshahay inaad iibsato ciyaaro iyo codsiyo? Ma dooneysaa inaad ka fogaato eedeymaha khaldan? Waxaan ku siineynaa fikrado aad iskaga ilaaliso inaad ku dhacdo qarashaadka qalad ahaan barnaamijyada Google Play.
Maxaa ku dhacay Viber? Magacaabista koowaad ee cinwaanka WhatsApp Killer
Viber in kasta oo lagu jiro xaalad caajis ah, wuxuu sugaa daqiiqad ku habboon inuu qaniino xoogaa yar oo macaamiisha WhatsApp ah.
Chorus wuxuu ku heesaa heesta aad ugu jeceshahay isla waqtigaas taleefannada gacanta oo kala duwan
Chorus wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto barta 'WiFi' oo aan ku xirmi karno aalado dhowr ah oo mobiil ah si hees ama playlist loo wada ciyaaro isla waqtigaas.
Digniinta Android!, Iska jir inaad kala soo baxdo Flappy Bird dukaanka Play ama dukaamada kale
Feejignaan cusub oo Android ah ayaa lagu ogaadey nuqullo aan asal ahayn oo ah Flappy Bird taas oo qaar badan oo ka mid ahi nagu ridayaan malware-ka Android.
Ma xasuusataa Facebook Home?, Alias ​​Facebook Home Launcher, oo ah hoyga Facebook oo aad loo hagaajiyay
Lahaanshaha 'Hoas Home Home' ee loo yaqaan 'Alias ​​Facebook Home Launcher' waa 'launcher' Android ah oo la mid ah Facebook Home laakiin aan lahayn cilladaha jira.
Codsiyada Android ee odayaashayada, maanta Masil Home Launcher Launcher
Masil Home Launcher Launcher waa barnaamij bilow ah oo loogu talagalay dadka waayeelka ah ama aragga naafada ka ah.
Sidee loo rakibaa barnaamijyada taleefankaaga Android?
Haddii aad tahay qof cusub oo aad isku dayeyso inaad ka bilowdo adduunka barnaamijyada, maanta waxaan kaa caawin doonaa adiga oo kuu sheegaya sida loo rakibo barnaamijyada taleefankaaga Android.
Casharrada loogu talagalay dadka cusub: Sidee loo abuuraa koonto Google Play ah?
Si aad barnaamijyada ugala soo baxdo taleefankaaga casriga ah waxaad u baahan tahay akoon Google Play ah, maantana waxaan ku tusaynaa talaabo talaabo ah casharkeena Android ee loogu talagalay dadka cusub.
Xidid Xperia kasta oo leh VRoot
VRoot wuxuu ku wareejiyaa Android-kaaga daqiiqad gudahood hal guji.
Aalado waxtar leh oo loogu talagalay Android, Maanta Widgetka Kalandarka
Maanta Widgets-ka Faa'iidada leh ee Android waxaan rabaa inaan soo bandhigo oo aan kugula taliyo Widget-ka fudud ee fudud ee fudud meesha ay jirto laakiin shaqeynaya 100 x 100.
Sidee loo xakameynayaa wicitaanada lambarrada taleefannada qaarkood ee ku yaal Android?
Waxaan sii wadeynaa inaan kahadalno khiyaanooyinka Android ee kujira baloogkeena maantana waxaan soo bandhigeynaa cashar si aan kuugu xakameyno wicitaanada nambarada taleefannada qaarkood.
Codsiyo layaableh oo loogu talagalay Android, maanta Contakts
Contakts waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo buugga taleefankeenna siin doona muuqaal gebi ahaanba ka duwan.
Telegram waxaa lagu casriyeeyay ikhtiyaar si loo joojiyo ogeysiiska xiriirka cusub iyo inbadan
Telegram wuxuu leeyahay wanaag aad u wanaagsan iyo inuu ku dhacayo bulshada isticmaala Android, iyo in marka la raaco xariiqan ay noqon karto tartan weyn.
Marka la eego codsiyada badan ee noogu imanaya shabakadaha bulshada ee Androidsis, maanta waxaan rabaa in aan sharaxo sida loo kiciyo xulashooyinka horumariyaha.
Samsung waxay rajeyneysaa suurtagalnimada Galaxy S5 oo leh astaamaha cusub ee TouchWiz
Astaamaha cusub ee TouchWiz waxay muujinayaan qodobbada muhiimka ah halka Samsung Galaxy S5 cusub ee la soo bandhigi doono diirada la saari doono.
Download Flappy Bird wali waa suurta gal
Halkan waxaan kaaga tagaynaa mahadsanidiin XDA Developers si toos ah xiriiriyaha si aad u soo dejiso Flappy Bird qaab apk ah si aad ugu rakibi karto Android-kaaga gacanta.
Inbadan oo ku saabsan rukhsadaha ku saabsan Android, tanaasulaad cusub oo ku saabsan cusbooneysiinta
Dhibaatooyin badan oo ku saabsan Ogolaanshaha ku jira Android waxaa laga heli karaa cusbooneysiinta codsiyada halkaasoo codsiyo cusub oo rukhsad ah nala soo dhex geliyay.
TimePIN waxay ku siisaa amaan aad u daran taleefankaaga
TimePIN si aad u xoojiso amniga aaladdaada gacanta oo leh qaabab kala duwan oo adkeynaya furitaanka taleefankaaga.
Tim Cook Apple, eey cunug yar oo qaniinaya
Halkan waxaad ku haysaa qaar ka mid ah jawharadii uu Tim Cook inagu siiyay bayaannadii ugu dambeeyay ee uu kaga hadlayo Android sida shitty OS.
Waa maxay daalacashada Mini ee loogu talagalay Android?
Haddii qalabkaagu aanu ka mid ahayn kuwa ugu cusub suuqa oo waxa aad weydiiso biraawsar ay yihiin waxa saxda ah ee la sameeyo, waa inaad taqaanaa daalacashada Mini ee loogu talagalay Android.
Tijaabinta Telegram ee nooca desktop-ka ah
Halkan waxaan kuugu soo bandhigayaa fiidiyoow qaabka desktop-ka ee Windows ee Telegram u eg yahay, macmiilka fariimaha degdegga ah ee qof walba ka hadlayo
Chrome iyo Opera iyo Firefox: Muxuu yahay biraawsarka ugu fiican ee Android?
Haddii aadan weli hubin midka kuugu fiican adiga oo ah biraawsarka Android, maanta gudaha Androidsis waxaan ku siineynaa gacan hagitaan ah oo ku saabsan Chrome vs. Opera iyo Firefox.
Markii Nexus 5 la bilaabay, waxay la soo muuqatay Google Now launcher u gaar ah, oo wali gaar ah.
Laga bilaabo maanta, qalab khaas ah oo loo yaqaan 'Pinterest' oo Movistar u soo bandhigo macaamiisheeda ayaa lagu rakibi karaa telefoonnadaada.
Waxwalba aniga, Launcher-ka cusub ee loogu talagalay Android ayaa lagu cusbooneysiiyaa howlo cusub oo xiiso leh
Waxkasta oo aan furo waa mid ka mid ah Launchers-yada ugu fiican ee loogu talagalay Android ee aan ku raaxeystay isku dayga iyo in ka badan hadda oo leh astaamaha cusub ee lagu daray.
Jawaabta Facebook ee rukhsadaha cusub ee ay codsatay nooca cusub ee loogu talagalay Android
Halkan waxaad ku leedahay sharraxaad rasmi ah oo ay Facebook ka heshay rukhsadaha loo baahan yahay ee loogu talagalay codsiga rasmiga ah ee loogu talagalay Android
Soo dejiso APK-ka cusub ee Adeegyada Google Play oo leh hagaajinta Ciyaaraha Cayaaraha iyo waxyaabo kale oo badan
Adeegyada Google Play waxay sii wadaan koorsadooda iyagoo keenaya horumarin cusub nidaamkayaga la xiriira adeegyada Google ee loogu talagalay horumariyeyaasha iyo isticmaaleyaasha.
U soo degso rasmiga rasmiga ah ee 'BBM' APK ee loogu talagalay noocyada 'Gingerbread'
Halkan waxaad ku haysaa nooca daadatay ee asalka ah BBM apk ee loogu talagalay Android for noocyada Gingerbread ilaa Honeycomb.
Ma dooneysaa WhatsApp bilaash abidkeed, ka dibna u beddelo Telegram
Halkan waxaad ku haysaa jawaabo taxane ah oo ku saabsan su'aasha ah sababta looga beddelo WhatsApp loona beddelo Telegram?
Soo dejiso nooca beta-ka cusub ee WhatsApp oo wata taageerada Widgets-ka
Halkan waxaad kuheleysaa xiriiriye toos ah si aad u soo dejiso nooca beta-kii ugu dambeeyay ee WhatsApp oo ku shaqeynaya qalabka kumbuyuutarka.
Samsung waxay cusbooneysiineysaa interface-ka WatchON qaabka muuqaalka ee Android 4.4 KitKat
Samsung waxay diyaarinaysaa wadada loogu talagalay soo bandhigida Galaxy S5, barnaamijyaduna waxay sidoo kale helayaan noocyo cusub sida waqtigan WatchON.
Yahoo Weather, codsi xasaasi ah oo lagu hubiyo cimilada
Maanta waxaan rabay inaan soo bandhigo Yahoo Weather, oo dhadhankeyga shaqsi ahaaneed ay tahay mid ka mid ah codsiyada saadaasha hawada ee ugu wanaagsan.
Soodejiso Lenovo Music Player oo ah muusigga muusigga ah ee Lenovo
Halkan waxaan si toos ah kaaga tagayaa apk-ka muusigga muusikada caadiga ah ee kumbuyuutarrada Lenovo, Lenovo Music Player for Android
Faa'iidooyinka Android Widgets, BobClockD3
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo mid ka mid ah wijiyadaha ugu fiican ee saacadaha aan ka soo dejisan karno bilaash Google Play Store, magaceeda BobClockD3.
Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, maanta PIE Control
Xakamaynta PIE waa codsi ku saleysan barnaamijka ParanoidAndroid waana u qalmaa inuu ku jiro codsiyada cajiibka ah ee Android.
Ma rabtaa inaad BBM ku haysatid Android oo ku yaal Android Gingerbread?
Halkan waxaad kuheleysaa habka aad ugu raaxeysan karto BBM ee loogu talagalay Android noocyada Android ee aan ku habboonayn codsiga.
Sidee looga saaraa xannibaadda waddanka ee 'Android' ee suuqa leh 'Enabler'?
Hoos waxaan ku muujineynaa sida looga gudbo xannibaadda markii aan dalab laga taageerin dalkeenna.
Inbadan oo ku saabsan rukhsadaha aan loo baahnayn ee ku jira Barnaamijyada Android
Tusaale kale oo wax ku ool ah oo ku saabsan rukhsadaha aan loo baahnayn ee codsiyada qaarkood looga baahan yahay Android.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa carruurtaadu sameeyaan mar walba? Carruurta Tracker ayaa kaa caawinaysa
Carruurta Tracker waa codsi loogu talagalay Android oo naga caawin doonta inaan ogaanno oo aan xakameyno waxa carruurteennu sameynayaan mar walba.